Maxaan sameyn karaa haddii lamaanaheygu iga xanaaqo? Dabcan waxaad u direysaa dhambaal caashaq oo raali galin ah sida kan oo kale.
Inaad raali galiso lamaanahaaga misana aad u dirto dhambaal caashaq oo qiiro leh waa habka ugu fudud ee aad markale qalbigeeda/qalbigiisa ku soo jiidan karto.
Sidee loo qoraa dhambaal caashaq oo raali galin ah?
Dabcan markaad rabto inaad qorto dhambaal caashaq oo raali galin ah waxaad u baahantahay inaad adeegsato erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh qaasatan kuwa taabanayo qalbiga lamaanahaaga.
Inaad u dirto lamaanahaaga dhambaal caashaq oo xiiso badan kuuma soo dhaweyn doonto qalbigiisa/qalbigeda ee waxay sidoo kale dhisi doontaa kalsoonideeda/ kalsoonidiisa.
Goormee u baahantahay dhambaal caashaq?
Dirista dhambaal caashaq uma baahnid oo kaliya inaad u dirto markuu lamaanahaaga kaa xanaaqo ee waxaad u baahantaha xili walbaa. Dhambaaladu ma ahan mid caashaq oo kaliya ee waxaa jiro dhambaalo dhowr nuuc ah sida.
Dhambaal salaamo ah
Dhambaal tahiniyad ah
Dhambaal mahadcelin ah
Dhambaal jaceyl oo salaan ah
Dhambaal jaceyl qof kugu cusub
1. Dhambaal salaamo ah
Dhambaal salaamo waxaa loo diraa qof adiga kugu weyn misana aad ixtiraamto. Haddii aad qofkaasi waa hore isku kiin dambeysay misana aadan ka heynin wax war ah marka laga reebo emailkiisa ama ciwaanka gurigiisa. Dhambaal salaamo ah waxaa la isticmaali jiray waa hore waayoo ma jirin aaladaan cusub ee maanta.
2. Dhambaal Tahniyad
Markaad maqasho dhambaal tahniyad ah durubaba waxaan umaleyn inaad garatay macnaha loo adeegsado. Taasi waxaan umaleyn inaadan sharaxaad uga baahneyn oo aad taqaano waxa loo adeegsado dhambaal tahniyad.
Markaad guursato waxaa dhambaal tahniyad ah kuu soo dirayo ehelkaaga iyo asxaabtaada, waxaana laguugu hambalyeyn arooskaaga iyo inaad doobnimada ka baxday.
3. Dhambaal Mahadcelin ah
Dirista dhambaal mahadcelin ah dadkeena aad beey ugu adag tahay mana aqaano sababta. Mar walbaa oo qof wax inoo falo uma mahadcelino, ma barbaarintii ayaa inaga qaldan? Ma burburkii dalka ayaa ina waxyeeleeyay? Ma waxaanan fahansaneyn asxaanka uu qofka inoo falay mise waan iska indho tireynaa marba haddii aan gaarnay yoolkeenii?
Waxaad arkeysaa qof ehel ah ama walaaladaa ah oo ku nool qurbaha, waxaad weydiisan lacag, wuu kaa aqbali wuuna kuu soo diri, iska dhaaf in qofku dhambaal mahadceli ah uu u diro ee xitaa kuma dhahayo lacagtii waan helay. What is wrong? Maxaa qaldan? Jawaabta anigaba ma aqaano. Si kastaba ha noqotee waa muhiim inaad u dirto dhambaal mahadceli ah qofka kaa caawiyay dhibaatadaada, ugu yaraan ku dheh waan helay waadna ku mahadsantahay.
4. Dhambaal jaceyl oo salaan ah
Waxaan arki jiray dad isu dirayo dhambaal jaceyl oo salaan ah laakin hadda sheekadaasi waa dhamaatay. Mr Facebook, Mr Whatsapp ayuu qofka ka leeyahay, Waan ku salaamay qaali oo qaleel ah iskaba daa inuu warqad dhambaal ah u diro si uu kadis uga dhigay lamaanahahiisa.
Waan ku salaamay qaali waa salaan qurux badan laakin ma ahan mid sokoreysan, maxaa yeelay lamaanahaagu waxa laga yaabaa inuu kaaga bartay salaantaasi si joogto ah, marka u bedel jawiga oo u dir erayo macaan oo kedis ah, sida erayadaan aan halkaan kuugu diyaarinay, adigoo raacinayo Waan ku salaamay qaali: Erayo macaan ah oo soo jiidasho leh.